Howl-gallada ka dhan ah al-Shabaab oo ka socdaan dalka
Waxaa dalka Soomaliyeed dhammaantiisa ka socdaan howl-gallo ka dhan ah ururka dilaaga ah ee al-Shabaab kuwaasoo loola jeedo in ururka lagaga saaro dhammaan dalkeenna.
Dhawaaan Ciidammada Xoogga Dalka waxay Gobalka Mudug gaar ahaan degmada Xarar-dheere ka billaabeen howl-gal ka dhan ah ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab.
Dhowaanahan Gobolka Mudug waxaa ka jiray baaqyo iyo abaabul ku aadan sidii kooxda al-Shabaab looga saari lahaa degmada Xarar-dheere iyo deegaanada ku dhow, waxaana Ciidamada Xoogga Dalka ay doonayaan iney bulshada ka dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyada al-Shabaab.
Sidoo kale, howlgal lagu baacsanayo maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-Shabaab ayaa ka bilowday degmada Waajid iyo deegaano hoostaga, si meesha looga saaro haraadiga nabad-diidka al-Shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku nool gobolka Bakool.
Dhanka kale, maamullada dowlad-goboleedyada Soomaaliyeed waxay dhawaan isku af-garteen in la aasaaso ciidan wada-jir ah oo ka kala socdaan maamul-goboleedyada kuwaasoo tiradoodu gaareyso 1000 si looga hortago ururka xag-jirka ah ee al-Shabaab